နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း H.E. Mr. William J. Clinton နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ | Burma Muslim
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း H.E. Mr. William J. Clinton နှင့်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
By burmamuslim on November 14, 2013	နေပြည်တော် နိုဝင်ဘာ ၁၄
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း H.E. Mr. William J. Clinton ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၉ နာရီခွဲတွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတ အိမ်တော်ရှိ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
ယင်းသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် ကလင်တန်ဖောင်ဒေရှင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတို့ နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားလိုမှု၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်ကူညီ ဆောင်ရွက်လိုမှု၊ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး၊ စီးပွားရေးကဏ္ဍစုံ ချဲ့ထွင်နိုင်ရေး၊ HIV, AIDS, TB ရောဂါဝေဒနာရှင်များအား ဆေးဝါးများ ဖြန့်ဖြူး ပေးရေးနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားနေသော ဒေသများ၌ လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး စသည့် လုပ်ငန်း စဉ်များတွင် ပါဝင်ကူညီ ဆောင်ရွက်သွားလိုမှု၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေမှု၊ ငါးနှစ်အောက် ကလေး၊ မွေးကင်းစကလေးနှင့် မိခင် သေဆုံးမှု လျော့ကျရေးတို့အတွက် ငွေကြေးနှင့် သင်တန်းများ အထောက်အကူပြုနိုင်မှုတို့ နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်၊ ဦးအောင်မင်း၊ ဦးခင်ရီနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။http://www.moi.gov.mm/news/14/11/2013/id-1402